Mascuud Ozil oo Soomaaliya ugu deeqay deeq Gargaar ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Mascuud Ozil oo Soomaaliya ugu deeqay deeq Gargaar ah
Mascuud Ozil oo Soomaaliya ugu deeqay deeq Gargaar ah
Laacibkan ayaa kafaale qaaday afurinta 16,000 oo qof bisha Ramadaan, kuwaas oo ka kooban 2,000 qoys oo Suuriyaan iyo Turkish ah. Dhanka kale Mascuud Ozil ayaa 90,000 oo raashin Af-fur ah ugu deeqay Soomaaliya, taasi oo lagu qaybin doono magaalada Muqdisho, waxaanu lacagta ka baxaysa oo caddadkeedu dhan yahay £80,000 uu gacanta ka saaray Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga.
Madaxa Bisha Cas ee Turkiga ayaa wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa waddankaas u sheegay in sannadka oo dhan ay quudiyaan dadka baahan, waxaanu u mahadceliyey muxsiniinta sadaqada ugu tabaruca ee la socda shaqadooda.
Kerem Kinik waxa uu yidhi: “Bisha Cas ahaan, waxaanu garab taaganahay kuwa baahan 365-ka maalmood ee sannadka. Dabcan, waxa aanu taakuladan uga mahadcelinaynaa qaaraan bixiyeyaasha saaxiibada ah ee nala shaqeeya.
Ozil ayaa hore ula shaqeeyey hay’adda Bisha Cas ee Turkiga, iyadoo markii uu guursaday uu u dhiibay lacago lagu quudiyo qoysaska baahan.
Xiddigan caalamiga ah ee xulka qaranka Germany oo asal ahaan kasoo jeeda Turkey, waxa sannadkii uu sadaqo ku bixiyaa lacag lagu qiyaasay £2 milyan.
Ciyaaryahan Ozil ayaa dhowaan iska diiday inuu ogolaado in Arsenal ay mushaharkiisa ka jarto lacag dhan 12.5 boqolkiiba oo ay ciyaartoyda kale ee kooxdu ogolaadeen, hase yeeshee waxa muuqata in lacagtiisa uu u adeegsanayo bixinta qaaraan Diinta Islaamku jidaysay oo uu Allah ugu dhowaanayo.
Previous articleKhasaaro ka dhashay dagaal ka dhacay duleedka Gaalkacyo
Next articleRW Kheyre oo Amar siiyey Guddiga ka hortagga COVID-19
Xaliimo Yarey oo ka qeybgashay kulan looga hadlayay saameynta COVID-19 ee doorashooyinka
Dhageyso:-Maamulada Galmudug & Puntland oo Go’aano soo saaray
Ilhan Cumar oo ka hadashay dilka Ninkii Madowga ahaa